2020 CRM စာရင်းအင်းများ - သုံးစွဲသူဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းများ၏အသုံးပြုမှု၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ | Martech Zone
ဤသည် CRM စက်မှုလုပ်ငန်းစာရင်းဇယား၏ကြီးမားသောစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ CRM ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်မသိပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သည်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ…ထိုအချက်အလက်များပါသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားဆောင်းပါးများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
CRM စက်မှုလုပ်ငန်း Stats
CRM သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသော software marketing ဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်)
CRM စျေးကွက်အရွယ်အစားသည်လက်ရှိတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀ ဘီလီယံရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် CRM စျေးကွက်သည်ဒေါ်လာ ၈၂ ဘီလီယံအထိတိုးတက်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်လျှင် ၁၂% တိုးတက်ခဲ့သည် (အရင်းအမြစ်)
CRM စနစ်များသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှရရှိသောဝင်ငွေအားဖြင့်ဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (DBMSs) ကိုကျော်လွန်ခဲ့သည် (အရင်းအမြစ်)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရောင်းဝယ်ရေးကိရိယာများတွင် CRM၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာရှာဖွေခြင်း၊ အချက်အလက်နှင့်စာရင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဖုန်းနှင့်အရောင်းဌာနများပါဝင်သည်။အရင်းအမြစ်)
CRM ၏တစ်နှစ်တာတိုးတက်မှုသည်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များကြားတွင် ၂၅% ရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
သစ္စာရှိမှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖောက်သည်များနှင့်တစ် ဦး ချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုဖန်တီးရန်အတွက်ထိပ်တန်းကိရိယာသုံးမျိုးနှင့် CRM သည် CRM ဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်)
B54B စျေးကွက်၏ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းတို့သည်သူတို့၏အရောင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူ“ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။အရင်းအမြစ်)
CRM အသုံးပြုသူ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အိုင်တီက ၁၃% နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ ၁၃% တွင်ရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုဘိုင်း CRM စျေးကွက်သည်ယခုနှစ်တွင် ၁၁% မှဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလီယံသို့တိုးတက်လာလိမ့်မည် (အရင်းအမြစ်)
သော့ချက် CRM Stats
ယေဘုယျ CRM အသုံးပြုမှုသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၅၆% မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၇၄% သို့တိုးတက်ခဲ့သည်။အရင်းအမြစ်)
၀ န်ထမ်း ၁၁ ဦး ထက်ပိုသောကုမ္ပဏီ ၉၁% သည် CRM စနစ်ကိုအသုံးပြုကြသည် (အရင်းအမြစ်)
သုံးစွဲသောဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာအတွက် CRM အတွက်ပျမ်းမျှ ROI သည်ဒေါ်လာ ၈.၇၁ ဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်)
CRM သည်ကူးပြောင်းနှုန်းကို ၃၀၀% တိုးစေနိုင်သည် (အရင်းအမြစ်)
အသင်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် mobile CRM ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။အရင်းအမြစ်)
CRM အပလီကေးရှင်းများသည်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး လျှင် ၀ င်ငွေကို ၄၁% အထိတိုးနိုင်သည်။အရင်းအမြစ်)
CRM သည်ဖောက်သည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ၂၇% အထိတိုးမြှင့်ပေးသည်ဟုလူသိများသည် (အရင်းအမြစ်)
သင်၏ဖောက်သည်များထိန်းသိမ်းထားခြင်းအားဖြင့် ၅% မျှသာတိုးခြင်းသည်အမြတ်ကို ၂၅% မှ ၉၅% ကြားတိုးနိုင်သည်။အရင်းအမြစ်)
၀ ယ်သူ၏ ၇၃% သည် ၀ ယ်ယူသူဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ၀ ယ်ယူသူ၏အတွေ့အကြုံကိုအရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုအဖြစ်ညွှန်ပြကြသည်။အရင်းအမြစ်)
လုပ်ငန်းရှင် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းကနည်းပညာအသစ်ကိုလက်ခံခြင်းသည်သူတို့ကုမ္ပဏီရင်ဆိုင်နေရသောအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
CRM အသုံးပြုမှု Stats
အရောင်းအဖွဲ့ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် CRM စနစ်များကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြသည် (အရင်းအမြစ်)
မည်သည့် CRM ကိုအသုံးပြုမည်ကိုစဉ်းစားသောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၆၅% အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ၂၇% အချိန်ဇယားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ၁၈% ဒေတာလျှပ်တစ်ပြက်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသည်။အရင်းအမြစ်)
၁၃% သောကုမ္ပဏီများက CRM တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်၎င်းတို့၏ထိပ်တန်းရောင်းအား ဦး စားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။အရင်းအမြစ်)
သုံးစွဲသူ ၈၁% သည် CRM ဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်ကုန်များစွာမှရယူသုံးစွဲနေသည်။အရင်းအမြစ်)
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၁၂% သာ cloud-based CRM ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် - ယခုကိန်းဂဏန်းသည် ၈၇% အထိတိုးလာသည်။အရင်းအမြစ်)
ဆက်သွယ်ရန်စီမံခန့်ခွဲမှု (၉၄%)၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု (၈၈%) နှင့်အချိန်ဇယား / သတိပေးမှုဖန်တီးခြင်း (၈၅%) သည်အမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုထားသော CRM ဆော့ဝဲလ်များဖြစ်သည် (အရင်းအမြစ်)
CRM Stats အကျိုးကျေးဇူးများ
CRM software သည်ရောင်းအား ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ၃၄% နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကို ၄၂% တိုးမြှင့်နိုင်သည်။အရင်းအမြစ်)
ထိရောက်သောအရောင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် CRM သို့မဟုတ်အခြားစံချိန်စံညွန်းဆိုင်ရာစနစ်တစ်ခုကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူများဖြစ်ရန် ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းပိုများသည်။ (အရင်းအမြစ်)
ရောင်းအား ၈၇% တိုးတက်မှု၊ စားသုံးသူစိတ်ကျေနပ်မှု ၇၄%၊ စီးပွားရေးထိရောက်မှု ၇၃% တိုးတက်မှုအရင်းအမြစ်)
CRM ဆော့ဝဲလ်စနစ်၏ ROI သည်မှန်ကန်စွာအကောင်အထည်ဖော်လျှင် ၂၄၅% ကျော်နိုင်သည်။အရင်းအမြစ်)
CRM ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုသူ ၇၄% ကသူတို့ရဲ့ CRM system ကသူတို့ကိုဖောက်သည်အချက်အလက်တွေပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အရင်းအမြစ်)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းက CRM သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာကြောင်း၊ ၆၅% သည်ရောင်းအားခွဲဝေမှု၊ အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ် ၄၀%၊ ၇၄% သည်ဖောက်သည်များ၏ဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်အရင်းအမြစ်)
၇၅% ထက်နည်းသော CRM မွေးစားနှုန်းရှိသောကုမ္ပဏီများသည်အရောင်းအဖွဲ့များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။အရင်းအမြစ်)
ဖောက်သည် ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းကကုမ္ပဏီ၏အတွေ့အကြုံသည် ၄ ​​င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့အရေးကြီးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ (ရင်းမြစ်)
ဖောက်သည် ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်သောအခါဆက်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံရှိရန်မျှော်လင့်ကြသည် (အရင်းအမြစ်)
ဖောက်သည် ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဌာနများအကြားအဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်ကြသည် (အရင်းအမြစ်)
သုံးစွဲသူ ဦး စားပေးအချက်အလက်များ
ဖောက်သည်များ၏ ၉၄% သည်အရင်းအမြစ်တစ်ခုတည်းမှဝယ်ယူရန်ကြိုးစားနေကြသည် (Tech.co)
အမေရိကန်စားသုံးသူ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းကကုမ္ပဏီများသည်ကောင်းမွန်သောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။အရင်းအမြစ်)
၇၃% သည် ၀ ယ်ယူသူဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ၀ ယ်ယူသူ၏အတွေ့အကြုံကိုအရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြသည်။အရင်းအမြစ်)
စားသုံးသူ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းကကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်၏တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အရေးယူရန်လိုအပ်သည်ဟုသဘောတူကြသည် (အရင်းအမြစ်)
စားသုံးသူ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းက ၀ ယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အခါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်အထောက်အကူအများဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည် (Tech.co)
ဖောက်သည်များ၏ ၄၀% သည်လူတစ် ဦး အားကူညီသည်ဖြစ်စေမဂရုမစိုက်ပါဟုတောင်းဆိုသည် (အရင်းအမြစ်)
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ ၆၈% သည်၎င်းတို့အပေါ်ဂရုမစိုက်မှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည် (အရင်းအမြစ်)
သုံးစွဲသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများပေးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ၀ ယ်ယူရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည် (အရင်းအမြစ်)
၉၀% ကကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်မှုသည် site ကိုပင်ကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည် (အရင်းအမြစ်)
သုံးစွဲသူများသည်သူတို့ကုမ္ပဏီ၏အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုခံစားရသောအခါကုမ္ပဏီတွင် ၁၉% ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့သည်။အရင်းအမြစ်)
စားသုံးသူ ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းက ၀ ယ်လိုသည်မှာကုမ္ပဏီ၏လူမှုရေးကိစ္စများအပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။အရင်းအမြစ်)
၇၆% က ၄ င်းတို့၏ယုံကြည်ချက်များနှင့်ဆန့်ကျင်သောပြviewsနာများကိုအမြင်နှင့်ကိုင်တွယ်ပါကကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။အရင်းအမြစ်)
CRM Stats စိန်ခေါ်မှုများ
အရောင်းပညာရှင် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းက CRM ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမသေချာပါဘူးအရင်းအမြစ်)
CRM လေ့လာမှုအရ CRM မွေးစားခြင်း၏နံပါတ်တစ်စိန်ခေါ်မှုမှာလက်စွဲအချက်အလက်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည် (အရင်းအမြစ်)
အရောင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် CRM ဆော့ဖ်ဝဲစီမံခန့်ခွဲမှုကဲ့သို့သောရုံးရုံးချိန်၏သုံးပုံနှစ်ပုံကိုသုံးကြသည်။အရင်းအမြစ်)
CRM အသုံးပြုသူ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်းတို့၏ CRM စနစ်၏အင်္ဂါရပ်များထက်ဝက်အောက်သာသာအသုံးပြုကြသည်။အရင်းအမြစ်)
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၃၂% သည်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီကျော်လက်စွဲစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် CRM မွေးစားမှုမရှိခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်)
၁၃% သောကုမ္ပဏီများကလွန်ခဲ့သော ၂-၃ နှစ်ကထက်နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်မှုများတွင်အရောင်းနည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။အရင်းအမြစ်)
အရောင်း ၀ န်ထမ်း ၁၀ ဦး လျှင် ၆ ယောက်ကသူတို့အလုပ်အတွက်ဘာအလုပ်လုပ်သည်ကိုသိသောအခါ၎င်းတို့သည်မပြောင်းပါဟုပြောကြသည်။ (အရင်းအမြစ်)
လုပ်ငန်းရှင် ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းကနည်းပညာအသစ်ကိုလက်ခံခြင်းသည်သူတို့ကုမ္ပဏီရင်ဆိုင်နေရသောအကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။Tech.co)
စီးပွားရေးပိုင်ရှင် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းကလက်စွဲစာအုပ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး ၁၇% တွင်အချက်အလက်ပေါင်းစည်းမှုမရှိခြင်းနှင့်မမှန်ကန်သော / မမှန်ကန်သောအချက်အလက်များ ၉% နှင့်ရောင်းအား၏ ၉% ကိုခြေရာခံရန်အခက်အခဲရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။အရင်းအမြစ်)
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ CRM မပါရှိသည့် ၄၀% က ၄ င်းတို့သည်တစ်ခုအားအကောင်အထည်ဖော်ရန်အရင်းအမြစ်များမရှိဟုဆိုကြသည်။အရင်းအမြစ်)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းကစာရွက်စာတမ်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးသည်သူတို့၏အချိန်ကုန်ဆုံးအလုပ်များဖြစ်သည်ဟုအခိုင်အမာဆိုကြသည်။Tech.co)
CRM မရှိသောအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ၃၄ ရာနှုန်းသည်အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ခုခံအားကိုတိုက်ဖျက်သည်။အရင်းအမြစ်)
အကောင်အထည်ဖော်သော CRM ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၄၇% သာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မွေးစားနှုန်းသည် ၉၀% ကျော်ရှိသည်။ရင်းမြစ်)
အရောင်း ၀ န်ထမ်းများ၏ ၁၇% သည်သူတို့၏လက်ရှိ CRM ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်အခြားကိရိယာများနှင့်ပေါင်းစည်းမှုမရှိခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည် (အရင်းအမြစ်)
ဖောက်သည် retention Stats
ဖောက်သည်အသစ်များထံရောက်ရှိရန်မှာသင်၏လက်ရှိ ၀ ယ်သူများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ၅ ဆကုန်ကျသည်။အရင်းအမြစ်)
သစ္စာစောင့်သိသုံးစွဲသူများသည်ဖောက်သည်အသစ်များထက် ၆၇% ပိုသုံးစွဲကြသည်။အရင်းအမြစ်)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ရှိပြီးသားဖောက်သည်တစ် ဦး အားရောင်းရန် ၆၀% မှ ၇၀% အခွင့်အလမ်းရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်များသည်ပြန်လည်ဝယ်ယူရန် ၅ ဆပိုရှိပြီးကုန်ပစ္စည်းအသစ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသစ်ကိုခုနစ်ဆပိုရနိုင်သည်။အရင်းအမြစ်)
သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်များသည်ရည်ညွှန်းရန် ပို၍ များနိုင်ပြီးရည်ညွှန်းထားသည့်ဖောက်သည်အသစ်များသည်မဟုတ်သူများထက် ပို၍ အဖိုးတန်သည် (အရင်းအမြစ်)
ရှောင်ရှားနိုင်သည့်စားသုံးသူပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၃၆.၈ ဘီလီယံအရှုံးပေါ်သည်။အရင်းအမြစ်)
ဤတွင် CRM ပံ့ပိုးသူများ၏စျေးကွက်ဝေစုဇယားကိုကြည့်ပါ။
Salesforce သည် CRM စျေးကွက်ဝေစု၏ ၁၉.၅% ဖြင့်ထိပ်တန်း CRM ရောင်းချသူဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်)
Salesforce သည်၎င်း၏အနီးဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော SAP ထက်နှစ်ဆကြီးမားသည် (အရင်းအမြစ်)
အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည် ၁၅၀,၀၀၀ ပေးသည်။အရင်းအမြစ်)
Fortune ၅၀၀ ၏ကုမ္ပဏီ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် Salesforce ဖောက်သည်များဖြစ်သည် (အရင်းအမြစ်)
Salesforce ၏လက်ရှိတန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၁၇၇.၂၈ ဘီလီယံဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်)
ထုတ်ဖော် - ဒေါက်ဂလပ်သည်ပူးတွဲတည်ထောင်သူဖြစ်သည် Highbridgeတစ်ဦး Salesforce ပါတနာ.
Hubspot ၏လက်ရှိခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 10.1 ဘီလီယံ (အရင်းအမြစ်)
Hubspot တွင်ဖောက်သည် ၅၆,၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
Hubspot ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေသည်ကန်ဒေါ်လာ ၁၈၆.၂ သန်းဖြစ်ပြီး Q186.2'29 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။ (အရင်းအမြစ်)
Hubspot သည် CRM စျေးကွက်ဝေစု၏ ၃.၄% ရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
Monday.com တန်ဖိုးအားအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၇ ဘီလီယံဖြင့်တန်ဖိုးသတ်မှတ်သည်။အရင်းအမြစ်)
Monday.com တွင်ငွေပေးချေသူ ၈၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
Monday.com အတွက်စုစုပေါင်းဝင်ငွေမှာ ၁၁၂.၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်)
Zoho သည်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံမှ ၁၅ ဘီလီယံကြားရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်သည် Zoho CRM ကိုအသုံးပြုကြသည် (အရင်းအမြစ်)
Zoho ၏နှစ်စဉ်ဝင်ငွေသည်ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ခန့်ရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
လက်ရှိ SugarCRM တန်ဖိုးဒေါ်လာသန်း ၃၅၀ ခန့်ရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
Microsoft က Dynamics ကို CRM Stats
Microsoft Dynamics သည် CRM စျေးကွက်ဝေစု၏ ၂.၇% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။အရင်းအမြစ်)
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၄၀,၀၀၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်မကသော Microsoft Dynamics CRM ကိုအသုံးပြုသည်။အရင်းအမြစ်)
Zendesk သည်လက်ရှိတွင်ဒေါ်လာ ၂.၁ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
Zendesk မှာလူ ဦး ရေသန်း ၃၀၀ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဖောက်သည် ၄၀,၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်။အရင်းအမြစ်)
Zendesk အတွက်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၈၁၄.၁၇ သန်းဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်)
Freshworks သည် Freshdesk CRM ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သောဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်)
Freshdesk တွင်ဖောက်သည် ၄၀,၀၀၀ ကျော်သည်။အရင်းအမြစ်)
Freshwork ၏နှစ်စဉ်ဝင်ငွေမှာဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ခန့်ရှိသည်။အရင်းအမြစ်)
2020 CRM စာရင်းအင်း Infographic
ဒီနေရာမှာ Tech.co မှအချက်အလက်အပြည့်အစုံပါ။ 93 ဆော့ဝဲလ်ကိုနားလည်ရန်ကူညီရန် CRM စာရင်းအင်းများ.
Tags: CRMအကျိုးကျေးဇူးများ crmစာရင်းအင်းအချက်အလက်များဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုinfographic